चुइगम निल्दा के हुन्छ ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यचुइगम निल्दा के हुन्छ ?
विराटनगर/धेरैजसो मानिस चुइगम चपाउने गर्छन् । चुइगमबाट आउने रस स्वादिलो हुनेहुँदा चुइगमलाई चपाउने, यसको स्वाद लिने र फ्याँक्ने गर्नुपर्छ । चुइगमलाई फुलाउँदै पड्काउनुको मज्जा पनि बेग्लै हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ चुइगम चपाउँदा–चपाउँदै निलिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा चुइगम घाँटीभित्र गएर आन्द्रामा टाँसिने, आन्द्राको प्वाल टालिने, जीवनभर चुइगम शरीरभित्र नै रहने वा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आउन सक्नेजस्ता कल्पना गर्दै चिन्तिन हुन थालिन्छ । र, चुइगम निलेपछि यस्तो विचार आउनु स्वाभाविक पनि हो ।
यसरी एकपटक चुइगम निल्दा भने शरीरलाई कुनै पनि प्रकारको नोक्सानी नहुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । तर, हाम्रो शरीरले चुइगमलाई पचाउन सक्दैन । मिठाई, रङ र विभिन्न प्रकारका स्वादसहित इलास्टोमर्स, रेजिन, फ्याट्स, इमुलिसिफायर र मोमहरूको मिश्रणले बनेको चुइगमलाई पेटले अरू खाना पचाए जसरी सजिलै पचाउन सकिँदैन ।
जानकारहरूका अनुसार एकपटक चुइगम निलेपछि आन्द्राले बाहिर निष्कासन नगरेसम्म शरीरले यस्ता अपाच्य पदार्थलाई पाचन प्रक्रियासँगै सार्छ । अन्ततः एक वा दुई दिनभित्रमा शरीरबाट चुइगम निष्कासन भएर जान्छ । सजिलै निष्कासन भएर जाने भए पनि चुइगम निल्ने गर्नुहुँदैन । पटक–पटक वा धेरै मात्रामा चुइगम निलेमा यसले पाचन प्रणालीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ वा आन्द्रालाई ब्लकसमेत गर्न सक्छ ।
त्यसैले बच्चाले पूर्णरूपमा चुइगमका बारेमा नबुझेसम्म उनीहरूलाई चुइगम चपाउन दिनुहँुदैन ।